Indlela yokuphucula ukuthengisa kwe-Amazon kum njengomthengisi wasesekho ngaphaya kwalo?
I-Amazon iyinyaniso "ye-behemoth" yangoku yokuthengiswa kweentengiso ze-intanethi. Kwakudla ngokumangalisa, yintoni eyayiyilwe kwaye yaqaliswa nje nge-online storestore (engaphezulu kweminyaka engama-20 edlulileyo), ngoku ibonakala njengento ekhudlwana. Ngaba unokucinga ukuba ngaphezu kwezigidi ezili-110 zivakatyelele ukuvakashelwa kwee-shopper ziqikelelwe kuloo ndawo yindawo ekuthengwa kuyo? Yingakho umthengisi wanamhlanje ufuna ukwazi indlela yokuphucula i-Amazon yangoku yeentengiso.
Yintoni abafanele bayayiqonda? Indlela yokuphucula i-Amazon yokuthengisa kunye neendlela ezithengiswayo kwiindawo zabo zokuthengisa? Ziziphi iindidi zemveliso ngoku zizona zinzuzo kakhulu? Kwaye nangokunjalo. Ngokubhekisele kuwe, ekubeni ngumthengisi we-novice kule ncintiswano yemakethe yezinga lokunciphisa ngokwenene, udaba lokuphucula ukuthengisa kwe-Amazon alupheli kumbuzo. Ngoba? Kungenxa yokuba kungenalo ulwazi olwaneleyo kunye nezakhono ezibonakalisiweyo-kwaye-ezibonakalisiwe zenzeke ukuba akunakwenzeka ukuba uphile kuloo ndawo. Yingakho ngaphantsi ndiza kukubonisa indlela yokuphucula ukuthengiswa kwe-Amazon yakho-kwaye uqhube uluhlu lwemveliso yakho kwimpumelelo yosesho lwemveliso, nokuba uziva ufana nomntu osomabhizinisi othengisayo apho okokuqala ngqa.
Indlela yokuphucula ukuthengisa kwe-Amazon -Izizathu eziphambili ze-Novice Sellers
Ukuqwalasela ukuba i-Amazon igxile kakhulu ekuboneleleni ngamava athengileyo, akukho mangaliso yokuba kukho imigaqo emiselweyo kuyo yonke idayisi ukuthobela. Yonke into elula - ukuba awukulandeleli, unokuvinjelwa ngokulula ukuqhuba ibhizinisi lakho lokubuyisela ngaphaya (kwimeko enzima kakhulu, unokufumana isinqatshelwe ngonaphakade). Ngoko, ukuba awufuni ukufunda yonke i-policy ye-Amazon yomthengisi nkqubo, yile nto ekufuneka ihlawulwe yakho ingqalelo. Ukuphucula ukuthengisa kwakho kwi-Amazon, kodwa ubuncinci ukuba uphile ngaphaya kwalapho kwaye uqale ukuhambisa indlela eya kwimpumelelo yakho yorhwebo njengomthengisi ohamba phambili kwintengiso yakho.
I-Setting ephezulu yeMithetho ye-Amazon
Ukugcina iziphumo ezilungileyo zeemveliso kunye nokuhlolwa kwabathengi abahle - mhlawumbi yindlela yokuzibeka njengomthengisi ophumelelayo kwi-Amazon ukuze ekugqibeleni abe ngumthengisi-mthengi omkhulu wokuthenga.
Gcina ingxoxo yesikhathi sangempela kunye nabaxumi bakho. Ukuphendula ngokukhawuleza kuyo nayiphi na impendulo engalunganga, kunye nokuphendula mhlawumbi nayiphi na imibuzo yomthengi malunga nenkonzo yakho ngaphandle kweeyure eziyi-24 - ayikho nayiphi na indlela yokunethezeka. Isenzo esivumelweyo ngokubanzi sokuxhaswa kwabathengi ukuba kulandelwe ngabo bonke abathengisayo abasebenzayo kwi-intanethi.
Ulwazi olulandelayo lokulandelela kufuneka luhlale lubonelelwa kumthengi ngamnye ekuthengeni nawe kwi-Amazon.
Yonke into oyithengayo kufuneka ixhaswe ngesethi yemifanekiso enyanzelisayo ebonisa zonke iindawo zokusetyenziswa kwayo kwansuku zonke kunye nezindlela eziqhelekileyo zokugcina. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba ubuncinane umfanekiso wemveliso kufuneka ube nomsitho omhlophe Source .